Desktop Converter kasoo horjeeddo Online Converter MP4
> Resource > Video > Desktop vs Online Converter MP4
Ma waxaad had iyo jeer u bilowday isticmaalka Converter ah online for files MP4 aad? Weligaa ma isku dayay diinta files MP4 adiga oo isticmaalaya Converter desktop ah? Ma taqaanaa farqiga u dhexeeya laba hab oo diinta? Waxaa laga yaabaa waxaan kaa caawin kara in aad la siinayo yar aragtiyo badan hab kasta ah, Habka 1: Iyada oo ah Converter MP4 online ama; Habka 2: Desktop Converter .
Habka 1: Online Converter MP4
Fiiri online video Converter free hoos ku qoran faahfaahin dheeraad ah oo ka timid oo aad yaabaa in guud ahaan halka diinta files MP4 aad. Waxaad isticmaali kartaa oo geliyaan faylasha aad dhex fayl deegaanka. Waxaa badasha videos in ku dhawaad ​​qaab kasta.
Fiiro gaar ah: Haddii aad doonayso inaad ka sii online video converters, kaliya halkan ka fiiri, List of Online Video converters
Si kastaba ha ahaatee, waxaad u bedeli karaan oo keliya MID file waqti. On top of in, markii qaab beddelidda doonaa way kala duwan yihiin waxay ku xiran tahay internet-aad ka sokow kale size factor qayb file sida, habka xawaaraha ee PC iyo iwm
Daal ee diinta faylasha aad MP4 mid mid ama in ay sugaan da 'ay sabab u tahay internet ah? Waa waqtigii aad siiso in ka badan si ay u Converter desktop ah! Gaar ahaan marka aad leedahay in ka badan dhowr files si loogu badalo oo aad ka rabtid in aad wax dheeraad ah la samayn karaa.
Ma aha in dhamaan converters online ogolaado in aad xaalkaa files ka hor diinta; Halkan ka in ay hal dhibic oo lagu daray hore ee isticmaalaya Converter desktop ah. Mid labaad waxa ay noqon doontaa meesha aad u bedeli karaan faylasha aad ku yaalla halkii ay mid mid ilaa 30 jeer ka dhakhsi oo la AAN tayada khasaaro.
On top of in, waxa kale oo aad edit karaa faylasha aad ka hor inta qaab beddelidda. Gaar ahaan la Wondershare Video Converter Ultimate , waxaad si fudud oo si sahlan loo edit karaa faylasha aad la sifooyinka tafatirka dhisay-in.
Upload files MP4 aad ( + dar Files ama jiitaa-iyo-hoos u dhac),
Guji Edit hawlaha tafatir dheeraad ah, ama
Riix Settings iswaafajin in faylasha aad,
Dooro Qaabka Output ,
U beddelaan .
Xulashada 1: U beddelaan si ay u File MP4 toos ah (ama wax ka bedel hore)
Ku haboon jiidi-iyo-hoos u aad video files gal barnaamijka;
Haddii kale, waxaa geliyaan ka fayl deegaanka ama nuqul oo paste URL ka video ee;
Guji Edit haddii aad rabto inaad qabato qaar ka mid ah tafatirka on videos ka hor qaab beddelidda, ama
Settings haddii aad u baahan tahay si ay ula qabsadaan ee video ee goobaha sida xal, heerka jir, heerka yara iyo iwm
Taasi waa hal dhibic oo lagu daray hore ee isticmaalaya Video Converter Ultimate sida ay dhisay-in la muuqaalada tafatirka aasaasiga ah. Waxaa intaa dheer in, waxa kale oo aad loogu badalo kartaa videos ku yaalla iyadoo ilaa 30 jeer ka dhakhsi iyo u tayo khasaaro.
Xulashada 2, horena of qaabab Output (la goobaha ugu fiican)
Noqon doonaa ku faraxsanahay in ay kala duwan ee la heli karo presets wajihi doonta goobaha ugu wanaagsan ee files MP4 Waxaad. Hadda ma aha in aad waqti baadi galay ama goob lagu taliyey ugu wanaagsan ee files iyo halkii si toos ah loogu badalo faylasha aad ku salaysan cadcad, nooca qalab ama iwm
Xulashada 3: Download Online iyo Beddelaan
Fadlan tixraac maqaalka ku saabsan sida loo Download Online Videos haddii aad jeceshahay in aad kala soo bixi online.
Dul u Download tab,
Nuqul iyo URL koollada ka browser ama guji + dar URL ,
Marka download u dhameystiray, u tag Dhameyso (at menu bidix) ka dibna riix on labixiyo yar si ay sidoo kale loogu badalo files ama ku gubi gal DVD ah.
Fiiro gaar ah : celi Xulashada 1 mar haddii aad buuxisay download.